भर्खरै सकुशल बा*चेका छोरा मिडियामा यस्तो भन्छन्, आमालाई बा’घले झ’म्टेर शरि’रको सबै भाग खा’एको! Bardiya | Public 24Khabar
Home News भर्खरै सकुशल बा*चेका छोरा मिडियामा यस्तो भन्छन्, आमालाई बा’घले झ’म्टेर शरि’रको सबै...
भर्खरै सकुशल बा*चेका छोरा मिडियामा यस्तो भन्छन्, आमालाई बा’घले झ’म्टेर शरि’रको सबै भाग खा’एको! Bardiya
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘कर्णाली प्रदेश सरकारलाई स्थिरता प्रदान गर्नका लागि’ दाहाल–नेपाल पक्षको नेकपामा आबद्ध रहेको बताएका छन् । डोल्पाबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित उनले आइतबार कित्ता परिवर्तन गर्ने बताए पनि अन्तिम समयमा पछि हटेका थिए । उक्त दिन ओली पक्षीय सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र जुम्लाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित पदम रोकाया भने दाहाल–नेपाल पक्षमा प्रवेश गरेका थिए । ओलीको साथ छाड्ने तीनै जना पूर्वएमालेबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका हुन् ।
२०७४ फागुनमा सरकार गठन हुँदा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा पूर्वमाओवादीबाट मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना, ओली समूहबाट ३ जना र नेपाल समूहबाट १ जना मन्त्री नियुक्त भएका थिए । ओली समूहबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका खड्कबहादुर खत्री २०७६ साउनमा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी प्रकरणमा पदमुक्त भएपछि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले नै सम्हालिरहेका छन् ।
अब ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा दाहाल–नेपाल समूहका सांसदको संख्या २२ पुगेको छ । सभामुखलाई छाडेर ओली समूहका १०, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् । यही अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइहाले कांग्रेस र राप्रपाको समर्थन हुँदा पनि पारित हुने अवस्था देखिँदैन । अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन २१ सांसदको आवश्यकता पर्छ । असोज २५ गते मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदा ओली पक्षमा रहेका दुवै जना मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका थिए । उतिबेला ओली पक्षीय नेताले मन्त्रीबाट राजीनामा दिन दबाब दिए पनि उनीहरूले अटेर गरेका थिए ।
अविश्वासको प्रस्ताव असफल बनाउने क्रममा नेपाल पक्षका असन्तुष्ट सांसदलाई मन्त्री दिने ‘भद्र’ सहमति भएको थियो । उतिबेला नेपाल समूहका ३ जनालाई मन्त्री र १ जनलाई संसदीय दलको सचेतक बनाउने सर्तमा उक्त समूहका ७ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । सहमतिअनुसार कुर्मराज शाही सचेतक नियुक्त भइसकेका छन् । अहिले ओली समूहका रावल र बुढालाई मन्त्रीमा थमौती गर्ने गरी दाहाल–नेपाल समूहमा प्रवेश गराइएको स्रोतको भनाइ छ । अब दाहाल–नेपाल पक्षले असन्तुष्ट पक्षलाई कसरी थामथुम पार्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
कर्णाली सरकारमा रिक्त रहेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र संविधानअनुसार थप एक मन्त्री वा राज्यमन्त्री गरी दुई जना थप्न सकिने अवस्था छ । ओली समूह भने दाहाल–नेपाल समूहका असन्तुष्ट सांसदलाई आफ्नोतिर तान्ने रणनीतिमा देखिन्छ । यही रणनीतिअनुसार पूर्वमाओवादी खेमाका दुई जना सांसद धर्मराज रेग्मी र ठम्मर बिष्ट ओली समूहमा प्रवेश गरिसकेका छन् । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक दुर्गाप्रसाद सापकोटा तत्कालका लागि प्रदेश सरकार सुरक्षितजस्तो देखिए पनि नेकपाभित्रको तरल राजनीतिक अवस्थाले कति बेला के हुन्छ भन्न नसकिने बताउँछन् ।
कमिटीमा पनि दाहाल–नेपालको वर्चस्व
कर्णालीका प्रदेश तथा जिल्ला कमिटी पदाधिकारीमा दाहाल–नेपाल समूहको वर्चस्व रहेको छ । २० जना अध्यक्ष र सचिवमध्ये उक्त समूहका १६ र ओली समूहका ४ जना छन् । १० जिल्लामध्ये ६ जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पूर्वमाओवादी (दाहाल) समूहका र सुर्खेतमा नेपाल पक्षका ध्रुवकुमार शाही गरी ७ जना दाहाल–नेपाल समूहका नेता जिल्ला अध्यक्ष छन् । दैलेख, सल्यान र डोल्पामा भने ओली समूहका अध्यक्ष छन् ।
सचिवमा पनि दाहाल–नेपाल समूहका ९ जना छन् । सुर्खेत, सल्यान, डोल्पा र दैलेखमा पूर्वमाओवादी तथा जुम्ला, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, मुगु र हुम्लामा नेपाल खेमाका सचिव छन् । हुम्ला जिल्ला कमिटी सदस्य रहेका मन्त्री रावल नेपाल–दाहाल समूहमा फर्केपछि कालीकोटमा मात्र ओली पक्षीय सचिव बाँकी रहेका छन् । प्रदेशका पदाधिकारीमा पनि दाहाल–नेपाल पक्षको वर्चस्व छ । ६ सदस्यीय पदाधिकारीमा इन्चार्ज जनार्दन शर्मासहित ४ जना दाहाल–नेपाल र २ जना ओलीका छन् । शर्मासहित सहइन्चार्जहरू प्रकाश ज्वाला, कालीबहादुर मल्ल र सचिव मायाप्रसाद शर्मा दाहाल–नेपाल समूहमा र अर्का सहइन्चार्ज यामलाल कँडेल तथा अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी ओली समूहमा छन् ।
Previous articleKulman Ghising कुलमानको कुशलतामाथि एकपछि अर्को प्रहार, आखिर किन हुँदैछ यस्तो सबैलाई बनायो स्तब्ध !
Next articleआर्मी बन्न हिडेका २१ बर्सिय मेख मगर मृ*त्यु स’ङ्ग ल’ड्दै , घर पुग्दा चल्यो रु*वाबासी Nepal update Gulmi